Nepal Samaya | जेल जीवन बिताइरहेका निर्दोष सैनिकबारे सबै बोलौं
नेपाल समय | काठमाडौं, सोमबार, भदौ ७, २०७८
देश र जनताको सुरक्षामा खटिने प्रण लिएर सैनिक सेवामा जीवन अर्पण गरेका सरोज तामाङ र लबकुमार गुरुङले आफ्नै संगठनभित्र पाएको यातना मानवीय कानुन, मानव अधिकार र सैनिक ऐनका दृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक छ। हतियार चोरीको अभियोगमा जेलमा राखिएका उनीहरू निर्दोष देखिएसँगै नेपाली सेनाभित्रको अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया कति फितलो रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। घटनाको गहन अनुसन्धान नै नगरी जंगी कानुनको समेत धज्जी उड्ने गरी निर्दोष व्यक्तिलाई जेलमा हालेर नेपाली सैनिक नेतृत्वले गरेको गम्भीर त्रुटिले कानुनी शासनको उपहास मात्रै गरेको छैन, पीडित व्यक्तिले अब न्यायका लागि कहाँ जाने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
चितवनस्थित नेपाली सेनाको कालीबहादुर गणबाट हराएको भनिएको १००७९२ नम्बरको सर्ट मेसिन गन (एसएमजी) चोरीको आरोपमा अमल्दार सरोज र लबकुमार जिल्ला कारागार चितवनमा सजाय काटिरहेका छन्। गन चोरेको आरोपमा सैनिक अदालतकै फैसलाबमोजिम लबकुमारलाई १० वर्ष र सरोजलाई ७ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। तर सोही गन अर्का व्यक्तिले अर्कै मितिमा गणबाट चोरेको बयान दिइसकेका छन्। यद्यपि, निर्दोष व्यक्तिलाई जेलबाट छुटाउन राज्य संयन्त्र गम्भीर देखिएको छैन। उनीहरूले अहिलेसम्म पाएको शारीरिक र मानसिक क्षतिपूर्तिबारे सोच्ने समय कुनै निकायले निकालेको छैन। सोही नम्बरको हतियार सिपाही गंगाधर ढकालले चोरेको स्विकारेपछि उनीहरूमाथिको अभियोग बनावटी रहेको तथ्य बाहिर आएको हो। ढकाल पनि यति बेला सेनाकै महेन्द्र दल गणमा कार्यरत हुद्दा भरत गुरुङको हत्या अभियोगमा जेलमा छन्। उनको साथबाट प्रहरीले एसएमजी गनसमेत प्राप्त गरिसकेको छ। र, सरोज र लबकुमार पनि सोही गन चोरीको अभियोगमा जेलमा छन्।
यो घटनाबाट सैनिक हिरासत अझैसम्म मानवअधिकारमैत्री रूपमा विकसित हुन नसकेको पुष्टि भएको छ। त्यहाँभित्र दिइने शारीरिक र मानसिक यातना यसको प्रमाण हो। ‘मैले र लबले भोगेको यातनाको त यो जुनीमा के, ५० जुनीमा पनि हिसाब–भरपाई हुन सक्दैन। त्यतिखेर घरपरिवारलाई पनि केही भन्न दिएनन्। 'भनिस् भने घरको मान्छेलाई उठाएर लिएर आउँछु, दिल्ली लगेर बेचिदिन्छु’ भन्दै धम्क्याउँथे,’ सरोज तामाङको यो भनाइ यसकै प्रमाण हो।
नेपाली सेनाका दुई कर्मचारीमाथि भएको यातना प्रकरण भने त्यत्तिकै साम्य हुनु हुँदैन। फौजीमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि तालिम दिँदा जुन तरिकाले अनुशासित गर्ने प्रयोजनका निमित्त सिकाइका रूपमा व्यवहार गरिएको हुन्छ, उसलाई कुनै आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्दा पनि त्यो खालको व्यवहार गर्नु झन् यातना नै हो।
मुलुकको कानुनले यातनालाई अपराध किटान गर्ने व्यवस्था गरे पनि अनुसन्धान गर्ने पद्धतिको विकास नभएको अवस्था छ। घुस खाएका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउँछ। तर प्रहरी ऐनमा यातनासँग सम्बन्धित विषयमा प्रहरीले नै मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रावधान छ। आफैंले यातना दिने अनि आफैंले मुद्दा चलाउने सम्भव हुन सक्दैन। त्यस कारण यस्ता घटना गुपचुपमा साम्य हुँदै जान्छन्। नेपाली सेनाका दुई कर्मचारीमाथि भएको यातना प्रकरण भने त्यत्तिकै साम्य हुनु हुँदैन। फौजीमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि तालिम दिँदा जुन तरिकाले अनुशासित गर्ने प्रयोजनका निमित्त सिकाइका रूपमा व्यवहार गरिएको हुन्छ, उसलाई कुनै आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्दा पनि त्यो खालको व्यवहार गर्नु झन् यातना नै हो।
नेपाली सेनामा ‘कोर्ट मार्सल’को व्यवस्था त छ तर, पछिल्ला अभ्यासले के देखाउँछ भने त्यहाँ मानव अधिकारको स्वच्छ पुर्पक्ष (फेयर ट्रायल)सम्बन्धी हकका मापदण्ड सुसंगत छैनन्। मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अंगीकार गरिँदैनन्। रोम विधानलगायत गम्भीर संगीन प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा समेत स्वच्छ पुर्पक्षको मापदण्डको व्यवस्था छ। तर यस्ता प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी मुद्दा चलाउने र समयमा इन्साफ दिन नसक्ने प्रवृत्तिका कारण ती दुई सैनिकको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको हो।
ती दुई सैनिकमाथि गरिएको ज्यादतीबाट अबका दिनमा यस्ता घटना अनुसन्धानमा कानुनी अभ्यासको समेत गहन अध्ययन हुनु आवश्यक छ। यस क्रममा तल्ला तहका अदालत र सैनिक अदालत सैनिक ऐनअन्तर्गत भएका मुद्दामामिला, कारबाही आदिका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका सैद्धान्तिक विमर्श र निष्कर्षबाट मार्ग निर्देशित हुनु अपरिहार्य छ। अब दुई सैनिक जवानमाथि भएको यातनाको क्षतिपूर्ति कसले दिने? उनीहरूका परिवारले पाएको सास्तीको मूल्य कसले तिर्ने? र आइन्दा नेपाली सेनाभित्र हुने यातना न्यूनीकरण गर्न कस्तो कानुनी प्रावधान अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा राज्य र अझ सैनिक नेतृत्व गम्भीर हुनैपर्छ। सैनिक नेतृत्वले मातहतलाई देशभक्त हुनुपर्छ र शत्रुविरोधी हुनुपर्छ मात्रै भनेर सिकाएर भएन, त्यो भन्दा बढी मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छ। यस्ता घटनाबारे सेनासँग सम्बन्धित राज्यका सबै निकाय मात्र होइन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजले पनि गम्भीर चासो लिनुपर्छ ताकि आइन्दा यस्ता घटना नदोहोरियून्।
(यो हतियार प्रकरणको अनुसन्धानमा सेना र प्रहरी कसरी चुके? अब के हुन्छ? हामी निरन्तर खोजविन र फलोअपमै छौँ। बाँकी शृंखलाका लागि नेपाल समय हेर्दै गर्नुहोला।)
चितवनमा आफ्नै साथी नेपाली सेनाका हुद्दा भरत गुरुङको गोली हानी हत्या गरेका थिए। गंगाधरलाई जब प्रहरीले १००९७२ नम्बरको एसएमजी (सट मेसिन गन)सहित पक्राउ गर्‍यो, त्यसपछि साढे दुई वर्षअघि चितवनस्थित भरतपुरकै कालीबहादुर गणमा हराएको एउटा गन प्रकरणको रहस्यमय पर्दा खुल्यो।
०७५ साल माघ २६ गते। उदयपुरस्थित त्रियुगामा रहेको आफ्नै घरमा थिइन्, तारा तामाङ। बहिनी प्रमिला पनि त्यहीँ आएकी थिइन्। बिहान भर्खर कुखुरा बास्न थालेका थिए। बेडमा मस्त सुतिरहेका थिए, तारा र प्रमिला।...
प्रकाशित: August 23, 2021 | 10:04:34 काठमाडौं, सोमबार, भदौ ७, २०७८